ပနျးပုဆရာကောငျးမြား နှလုံးသားလညျး လှရနျလို – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 9, 2019 April 10, 2019 kyaw zaw oo
ပနျးပုဆရာကောငျးမြား နှလုံးသားလညျး လှရနျလို
ပန်းပုဆရာကောင်းများ နှလုံးသားလည်း လှရန်လို
နိုင်ငံရေးမှာ ၀င်လုပ်တယ်ဆိုတာ လူထုကို သစ္စာခံပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ဆိုတာကို ထိပ်ဆုံး ဦးစားပေး ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး ၀င်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အဲသည်ရည်ရွယ်ချက် မှေးမှိန်နေပြီး အခြားရည်ရွယ်ချက်တွေကို ထိပ်တန်းတင် လုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါ မဖွယ်မရာ အဖြစ်အပျက်တွေ များစွာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
(ဖြစ်ရပ် တစ်) တရံသောအခါက . . . ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က စစ်တွေမြို့နယ် အောင်ဒိုင်ကျေးရွာကို ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါ ရွာသားအချို့က ကျွန်တော့်ကို ပြောပါတယ်။ သူတို့ရွာနီးချုပ်စပ်က လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော် (ဦးကျော်ဇောဦး) မလုပ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ပါတယ် ဆိုပြီး ပါတီတစ်ခုရဲ့ ပါတီတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ရှေ့မှောက်မှာ ထွက်ဆိုပေးဖို့ တစ်စုံတစ်ဦးက သူတို့ကို ငွေကြေးပေးတဲ့အတွက် ပိုက်ဆံယူပြီး စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရှေ့မှောက်မှာ ငွေပေးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်း ထွက်ဆိုပေးခဲ့တာကို သူကိုယ်တိုင်ကပဲ ရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းမရှိဘဲ အရက်မူးကျွဲခိုးပေါ်ဆိုသလို ပြောနေတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးသိရတဲ့ အချိန်မှာ အဲသည်အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျွန်တော် ဖြတ်ကျော်ပြီးခဲ့တာ နှစ်ကာလတွေ ချီခဲ့ပါပြီ။ အဲသည်မတရားလုပ်ကြံမှုတွေကို တွေ့ကြုံရတဲ့ အဲသည်ကာလကို Bob Marley ရဲ့ Time Will Tell ကိုနားထောင်ယင်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။
(ဖြစ်ရပ်နှစ်) တရံသောအခါက . . . ၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့ မြို့နယ်ပါတီရဲ့ အတွင်းရေးမှူးနေရာပဲကို ယူပြီးတော့ ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ယောက်ကို မြို့နယ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ခန့်ကြရင်မကောင်းဘူးလား ဆိုပြီးတော့ လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် အကြံပြုလိုက်မိတယ်။ မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌလုပ်ချင်တဲ့ အဲသည်လူဟာ အဲသလို အကြံပြုလိုက်ပြီး နောက်တစ်နေ့က စပြီး ကျွန်တော်(ဦးကျော်ဇောဦး) အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်စားနေတယ် ဆိုပြီး စစ်တွေမြို့နယ် ကျေးရွာတွေမှာ လျှောက်ပြောနေပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်း သတင်းတွေက ဘယ်လောက်ထိတောင် ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတော့ ကျော်ဇောဦး ကောင်းစားလွန်းလို့ သုံးထပ်တိုက်တောင် ဆောက်နေပြီ လို့ သတင်းမှားတွေ ပြောကြတဲ့အထိ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ်က ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ ဘဲကလေးတစ်ကောင်ကို သူ့စက်ဘီးနဲ့ မတော်တဆ ဖြတ်နင်းမိလို့ ရှိတဲ့ မုန့်ဖိုးလေးနဲ့ ဆေးရုံကိုလာပြီး ဘဲကလေးကို ဆေးကုပေးဖို့ လာပို့ပါသတဲ့။ အဲသည် ကလေးလေးရဲ့ နှလုံးသားမျိုး မိမိကိုယ်တိုင်အပါအ၀င် လူတွေမှာ ရှိစေချင်မိတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာ လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်တယ်။ စာရွက်ထက်မှာ စကားလုံးလှလှလေးတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရေးထားရေးထား၊ ပါတီထဲက လူတွေ မကောင်းရင် ပါတီတစ်ရပ်ရပ်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ယိုင်နဲ့လာတတ်တယ်။ နိုင်ငံရေးရာ ဆောင်ရွက်ကြရာမှာ “အလုပ်အကျွေးပြုရန်” ဆိုတာထက် “နေရာရရှိရေး” ဆိုတာကို ရှေ့တန်းတင်လာရင် ပြဿနာတွေ မတရားလုပ်ကြံမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။
NLD ပါတီတွင်းမှာ အယောင်ဆောင် ပန်းပုဆရာတွေ ကို ကိုင်တွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုမျိုးဆက်မင်းက ပို့စ် တစ်ခုရေးတင်ထားတာကို တွေ့လို့ ထပ်ဆင့်ဖတ်ကြစေလိုသော စေတနာနဲ့ ကူးယူတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
NLD ထဲမှာအချောင်သမားတွေ ရှိနေနိုင်တဲ့ အကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်တယ်။
ဒီလို စကားမျိူးကို ကြားရတဲ့ အတွက် ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းကိုလဲ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
NLD ထဲက အချောင်သမားများကို ပေါက်ဖွားစေသူသည် အခြား မဟုတ်…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးသော NLD ဘုတ်အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်တယ်။ဒါကို ကြားရင် မျက်မှောင်ကြုံ့ သဘာမတူလိုသူတွေရှိလိမ့်မယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ NLD ပါတီက အမတ်လောင်းတွေရွေးတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဗဟိုက ရွေးပေးလိုက်တာဆိုတဲ့ သူနဲ့ ဒေသခံတွေ ရွေးလိုသူတွေ သီးခြားစီ ဖြစ်နေတဲ့ အခါမှာ ဆူညံခဲ့ကြတာကို မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာ မြို့နယ် အသီးသီးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ့် အမတ်ဟာ နယ်ခံ ပါတီဝင်တွေ ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့သူဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
ကြည်ညိုရင်းစွဲရှိတာကြောင့် စကားအောင်မယ်။ အလုပ်တွင်မယ်။ လူရိုသေရှင်ရိုသေ ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာပိုင်း စိတ်ချရမယ်။
တနိုင်ငံလုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ အမတ် အစိုးရနေရာတွေကို ဗဟိုကနေရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အခါ သဘာဝကျကျ အားနည်းချက်တွေပေါ်လာတယ်။ ဗဟို အဖွဲ့လို လူတွေအနေနဲ့ လူတွေရဲ့ အကောင်းအဆိုး အကုန်လုံးကို ဘယ်သိနိုင်မလဲ။ ဒီအခါမှာ “အုတ်အရောရော ကျောက်အရောရော”ဖြစ်လာတော့တယ်။
တခြားသူတွေ မပြောနဲ့ NLD လော်ဘီ အုပ်စုတွေ ပြောနေတဲ့ လေသံ ပြောင်းလာရတာကိုပဲ သက်သေအနေနဲ့ကြည့်ပါ။ ၂၀၁၆-၁၇ မှာ စစ်အစိုးရထက် အစစ သာတယ် အခုမှ အစမို့ဆိုပြီး ဖာခဲ့ကြတယ်။ အခု ၂၀၁၉ အချိန်မှာ အများစု ပြောစကားကြည့်ရင် “အရည်အချင်းလိုအပ်နေသေးတာသိပါတယ်။ စစ်အုပ်စုတွေ လွှတ်တော်ထဲက မထွက်မချင်း NLD က်ို အားပေးရမယ်” ဆိုတဲ့ လေသံ ပြောင်းသွားရတယ်။
အခု NLD ကြုံတဲ့ အခက်အခဲတွေထဲမှာ အချို့အဝက်က အရင် နအဖ ဆိုးမွေ အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အချို့က က်ိုယ့်ဟာကိုယ် ပြဿနာမီးခွက်ထွန်းရှာတဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ကြည့်ရအောင် …ဝန်ကြီးချုပ် မြို့ဝန် ဝန်ကြီးတွေ စကားတွေ “ဗလစ်ဗလစ်” လျှောက်ပြောတယ်။ မဖြစ်နိုင်တာတွေ ကတိပေးတယ်။ဒါတွေ မပြောဘဲ ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံ နေရင် မရနိုင်ဘူးလား။
နောက် ဥပမာ ကြည့်ပါ။ မန္တလေးမြို့နာမည်ရတယ်။ သွားနေတာလဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ သွားနေတယ်။ အကယ်၍မန္တလေးလိုမျိုး ကျန်တိုင်းဒေသကြီး အားလုံး ဖြစ်ခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိူး တွေးကြည့်ပါလား။
၂-ခန့်ထားသည့်လူများကို မချုပ်ကိုင်ဘဲ အာဏာခွဲဝေ အပ်နှင်းမှု
၃-ဗဟိုမှ စဉ်ဆက်မပြတ် မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်မှု
ဒီ ၃ ချက်နဲ့ ပြည့်စုံရင် ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နယ်တကာ ခရီးထွက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ ထိတွေ့နေရတယ်။ ဒါဟာ တချိန်က လုပ်မိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားအတွက် ပြန်ပြီး အဖတ်ဆည်နေရတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါ့အပြင် သူ့ပါတီနဲ့ သူဟာ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်းနဲ့ အောင်မြင်မှု ရေးထိုးနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ဒါတွေ ဘာမှ မလုပ်လိုက်နိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
တကယ်တမ်းသာစံနစ်တကျ လူရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ထပ်မံ လူသစ်စုဆောင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ရင်
က- နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာ ဘင်္ဂါလီကိစ္စ အချက်ကျကျ တုန့်ပြန်နိုင်မယ်။
ခ- ပြည်တွင်းမှာ ဒုက္ခပေးဖို့ ချောင်းနေတဲ့ ဆန်ကုန်မြေလေး အုပ်စုကို တနေရာမှ မလွတ်အောင် ပိတ်ဆို့နိုင်မယ်
ဂ- တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေနဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ လုပ်နိုင်မယ်။
ဃ-သမ္မတကို မချုပ်ကိုင်ထားရင် သမ္မတဟာ ပြည်တွင်းက စီးပွားရေး ပညာရေး အစရှ်ိတာတွေမှာ လုပ်နိုင်တော့ လုပ်အားရမယ်။
A- လူရွေးချယ်မှု မမှန်ကန်ခြင်း
B-လူမှန်များ မရွေးမိသည့်အတွက် နေရာများစွာ တွင် စိတ်ချထား၍ မရတော့ဘဲ ဝင်ပါလာရခြင်း၊ သို့အတွက် central executive functions များအတွက် အချိန်လျော့နည်းခြင်း
C- နေရာများစွာတွင် လူကြီးများပါရသည့်အတွက် လက်အောက်များ အလိုလို ဘောင်ကျဉ်းသွားခြင်း
-သမ္မတဦးဝင်းမြင့် သမ္မတရာထူးရယူပြီး နောက် activities များ
-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်များနှင့်တွေ့ဆုံမှုများ
-၂၀၁၉ ရန်ကုန်စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် လူငယ်တစ်ဦးအား ထုတ်ပယ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်
နိုငျငံရေးမှာ ဝငျလုပျတယျဆိုတာ လူထုကို သစ်စာခံပွီး တိုငျးပွညျနဲ့ လူမြိုးကို အလုပျအကြှေးပွုဖို့ ဆိုတာကို ထိပျဆုံး ဦးစားပေး ရညျရှယျခကျြထားပွီး ဝငျလုပျသငျ့ပါတယျ။ အဲသညျရညျရှယျခကျြ မှေးမှိနျနပွေီး အခွားရညျရှယျခကျြတှကေို ထိပျတနျးတငျ လုပျဆောငျကွတဲ့အခါ မဖှယျမရာ အဖွဈအပကျြတှေ မြားစှာ ဖွဈလာတတျပါတယျ။
(ဖွဈရပျ တဈ) တရံသောအခါက . . . ၊ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈနှဈလောကျက စဈတှမွေို့နယျ အောငျဒိုငျကြေးရှာကို ကြှနျတျောရောကျတဲ့အခါ ရှာသားအခြို့က ကြှနျတေျာ့ကို ပွောပါတယျ။ သူတို့ရှာနီးခြုပျစပျက လူတဈယောကျနှဈယောကျဟာ ကြှနျတျော (ဦးကြျောဇောဦး) မလုပျတဲ့ အလုပျတဈခုကို လုပျပါတယျ ဆိုပွီး ပါတီတဈခုရဲ့ ပါတီတှငျး စုံစမျးစဈဆေးရေး အဖှဲ့ရှမှေ့ောကျမှာ ထှကျဆိုပေးဖို့ တဈစုံတဈဦးက သူတို့ကို ငှကွေေးပေးတဲ့အတှကျ ပိုကျဆံယူပွီး စုံစမျးရေးအဖှဲ့ရှမှေ့ောကျမှာ ငှပေေးသူခိုငျးတဲ့အတိုငျး ထှကျဆိုပေးခဲ့တာကို သူကိုယျတိုငျကပဲ ရှကျခွငျးကွောကျခွငျးမရှိဘဲ အရကျမူးကြှဲခိုးပျေါဆိုသလို ပွောနတေယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးသိရတဲ့ အခြိနျမှာ အဲသညျအဖွဈအပကျြတှကေို ကြှနျတျော ဖွတျကြျောပွီးခဲ့တာ နှဈကာလတှေ ခြီခဲ့ပါပွီ။ အဲသညျမတရားလုပျကွံမှုတှကေို တှကွေုံ့ရတဲ့ အဲသညျကာလကို Bob Marley ရဲ့ Time Will Tell ကိုနားထောငျယငျး ကြျောဖွတျခဲ့တယျ။
(ဖွဈရပျနှဈ) တရံသောအခါက . . . ၊ ခငျဗြားအနနေဲ့ မွို့နယျပါတီရဲ့ အတှငျးရေးမှူးနရောပဲကို ယူပွီးတော့ ဘှဲ့ရတဈယောကျယောကျကို မွို့နယျပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ခနျ့ကွရငျမကောငျးဘူးလား ဆိုပွီးတော့ လူတဈယောကျကို ကြှနျတျော အကွံပွုလိုကျမိတယျ။ မွို့နယျပါတီဥက်ကဋ်ဌလုပျခငျြတဲ့ အဲသညျလူဟာ အဲသလို အကွံပွုလိုကျပွီး နောကျတဈနကေ့ စပွီး ကြှနျတျော(ဦးကြျောဇောဦး) အာဏာပိုငျတှနေဲ့ပေါငျးပွီး လုပျစားနတေယျ ဆိုပွီး စဈတှမွေို့နယျ ကြေးရှာတှမှော လြှောကျပွောနပေါတော့တယျ။ နောကျပိုငျး သတငျးတှကေ ဘယျလောကျထိတောငျ ဖွဈလာသလဲ ဆိုတော့ ကြျောဇောဦး ကောငျးစားလှနျးလို့ သုံးထပျတိုကျတောငျ ဆောကျနပွေီ လို့ သတငျးမှားတှေ ပွောကွတဲ့အထိ ဖွဈသှားခဲ့တယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံ မဏိပူရပွညျနယျက ကလေးငယျတဈယောကျဟာ ဘဲကလေးတဈကောငျကို သူ့စကျဘီးနဲ့ မတျောတဆ ဖွတျနငျးမိလို့ ရှိတဲ့ မုနျ့ဖိုးလေးနဲ့ ဆေးရုံကိုလာပွီး ဘဲကလေးကို ဆေးကုပေးဖို့ လာပို့ပါသတဲ့။ အဲသညျ ကလေးလေးရဲ့ နှလုံးသားမြိုး မိမိကိုယျတိုငျအပါအဝငျ လူတှမှော ရှိစခေငျြမိတယျ။
နိုငျငံရေးပါတီဆိုတာ လူတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာ ဖွဈတယျ။ စာရှကျထကျမှာ စကားလုံးလှလှလေးတှေ ဘယျလောကျပဲ ရေးထားရေးထား၊ ပါတီထဲက လူတှေ မကောငျးရငျ ပါတီတဈရပျရပျဟာ တဖွညျးဖွညျး ယိုငျနဲ့လာတတျတယျ။ နိုငျငံရေးရာ ဆောငျရှကျကွရာမှာ “အလုပျအကြှေးပွုရနျ” ဆိုတာထကျ “နရောရရှိရေး” ဆိုတာကို ရှတေ့နျးတငျလာရငျ ပွဿနာတှေ မတရားလုပျကွံမှုတှေ ပျေါပေါကျလာပါတော့တယျ။
NLD ပါတီတှငျးမှာ အယောငျဆောငျ ပနျးပုဆရာတှေ ကို ကိုငျတှယျရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ ကိုမြိုးဆကျမငျးက ပို့ဈ တဈခုရေးတငျထားတာကို တှလေို့ ထပျဆငျ့ဖတျကွစလေိုသော စတေနာနဲ့ ကူးယူတငျပေးလိုကျပါတယျ။
NLD ထဲမှာအခြောငျသမားတှေ ရှိနနေိုငျတဲ့ အကွောငျး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောကွားလိုကျတယျ။
ဒီလို စကားမြိူးကို ကွားရတဲ့ အတှကျ ဖွရှေငျးဖို့ နညျးလမျးကိုလဲ မိတျဆကျပေးလိုပါတယျ။
NLD ထဲက အခြောငျသမားမြားကို ပေါကျဖှားစသေူသညျ အခွား မဟုတျ…ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျဦးစီးသော NLD ဘုတျအဖှဲ့ပဲ ဖွဈတယျ။ဒါကို ကွားရငျ မကျြမှောငျကွုံ့ သဘာမတူလိုသူတှရှေိလိမျ့မယျ။
၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ မတိုငျခငျမှာ NLD ပါတီက အမတျလောငျးတှရှေေးတယျ။ အဲ့ဒီမှာ ဗဟိုက ရှေးပေးလိုကျတာဆိုတဲ့ သူနဲ့ ဒသေခံတှေ ရှေးလိုသူတှေ သီးခွားစီ ဖွဈနတေဲ့ အခါမှာ ဆူညံခဲ့ကွတာကို မှတျမိဦးမယျထငျပါတယျ။
တကယျတမျးမှာ မွို့နယျ အသီးသီးမှာ တာဝနျထမျးဆောငျမယျ့ အမတျဟာ နယျခံ ပါတီဝငျတှေ ပွညျသူတှကေ ရှေးခယျြပေးလိုကျတဲ့သူဖွဈတာ အကောငျးဆုံးပါ။
ကွညျညိုရငျးစှဲရှိတာကွောငျ့ စကားအောငျမယျ။ အလုပျတှငျမယျ။ လူရိုသရှေငျရိုသေ ဖွဈတာကွောငျ့ ကိုယျကငျြ့သိက်ခာပိုငျး စိတျခရြမယျ။
တနိုငျငံလုံးအတှကျ အရေးပါတဲ့ အမတျ အစိုးရနရောတှကေို ဗဟိုကနရှေေးခယျြလိုကျတဲ့ အခါ သဘာဝကကြ အားနညျးခကျြတှပေျေါလာတယျ။ ဗဟို အဖှဲ့လို လူတှအေနနေဲ့ လူတှရေဲ့ အကောငျးအဆိုး အကုနျလုံးကို ဘယျသိနိုငျမလဲ။ ဒီအခါမှာ “အုတျအရောရော ကြောကျအရောရော”ဖွဈလာတော့တယျ။
တခွားသူတှေ မပွောနဲ့ NLD လျောဘီ အုပျစုတှေ ပွောနတေဲ့ လသေံ ပွောငျးလာရတာကိုပဲ သကျသအေနနေဲ့ကွညျ့ပါ။ ၂၀၁၆-၁၇ မှာ စဈအစိုးရထကျ အစစ သာတယျ အခုမှ အစမို့ဆိုပွီး ဖာခဲ့ကွတယျ။ အခု ၂၀၁၉ အခြိနျမှာ အမြားစု ပွောစကားကွညျ့ရငျ “အရညျအခငျြးလိုအပျနသေေးတာသိပါတယျ။ စဈအုပျစုတှေ လှတျတျောထဲက မထှကျမခငျြး NLD ကျို အားပေးရမယျ” ဆိုတဲ့ လသေံ ပွောငျးသှားရတယျ။
အခု NLD ကွုံတဲ့ အခကျအခဲတှထေဲမှာ အခြို့အဝကျက အရငျ နအဖ ဆိုးမှေ အုပျခြုပျရေးစံနဈကွောငျ့ ဖွဈပွီး အခြို့က ကျိုယျ့ဟာကိုယျ ပွဿနာမီးခှကျထှနျးရှာတဲ့ကိစ်စတှေ ဖွဈတယျ။ ဥပမာ ကွညျ့ရအောငျ …ဝနျကွီးခြုပျ မွို့ဝနျ ဝနျကွီးတှေ စကားတှေ “ဗလဈဗလဈ” လြှောကျပွောတယျ။ မဖွဈနိုငျတာတှေ ကတိပေးတယျ။ဒါတှေ မပွောဘဲ ရိုးရိုးကငျြ့မွငျ့မွငျ့ကွံ နရေငျ မရနိုငျဘူးလား။
နောကျ ဥပမာ ကွညျ့ပါ။ မန်တလေးမွို့နာမညျရတယျ။ သှားနတောလဲ တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ သှားနတေယျ။ အကယျ၍မန်တလေးလိုမြိုး ကနျြတိုငျးဒသေကွီး အားလုံး ဖွဈခဲ့ရငျ ဆိုတဲ့ အတှေးမြိူး တှေးကွညျ့ပါလား။
၂-ခနျ့ထားသညျ့လူမြားကို မခြုပျကိုငျဘဲ အာဏာခှဲဝေ အပျနှငျးမှု
၃-ဗဟိုမှ စဉျဆကျမပွတျ မကျြစိဒေါကျထောကျကွညျ့မှု
ဒီ ၃ ခကျြနဲ့ ပွညျ့စုံရငျ ဖွဈနိုငျခဲ့တယျ။
အခု ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာ နယျတကာ ခရီးထှကျပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့ ထိတှနေ့ရေတယျ။ ဒါဟာ တခြိနျက လုပျမိတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြအမှားအတှကျ ပွနျပွီး အဖတျဆညျနရေတဲ့ သဘောပဲ ဖွဈတယျ။
ဒါ့အပွငျ သူ့ပါတီနဲ့ သူဟာ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ သမိုငျးဝငျ မှတျတမျးနဲ့ အောငျမွငျမှု ရေးထိုးနိုငျတဲ့ အခှငျ့အလမျးတှရှေိခဲ့ပမေယျ့ ဒါတှေ ဘာမှ မလုပျလိုကျနိုငျဘူး ဖွဈသှားတယျ။
တကယျတမျးသာစံနဈတကြ လူရှေးခယျြခဲ့ပွီး ထပျမံ လူသဈစုဆောငျးတာတှေ လုပျခဲ့ရငျ
က- နိုငျငံတကာစာမကျြနှာမှာ ဘင်ျဂါလီကိစ်စ အခကျြကကြ တုနျ့ပွနျနိုငျမယျ။
ခ- ပွညျတှငျးမှာ ဒုက်ခပေးဖို့ ခြောငျးနတေဲ့ ဆနျကုနျမွလေေး အုပျစုကို တနရောမှ မလှတျအောငျ ပိတျဆို့နိုငျမယျ
ဂ- တိုငျးရငျးသား အဖှဲ့တှနေဲ့ ပကျြစီးသှားတဲ့ ယုံကွညျမှုကို ပွနျလညျတညျဆောကျဖို့ လုပျနိုငျမယျ။
ဃ-သမ်မတကို မခြုပျကိုငျထားရငျ သမ်မတဟာ ပွညျတှငျးက စီးပှားရေး ပညာရေး အစရျှိတာတှမှော လုပျနိုငျတော့ လုပျအားရမယျ။
A- လူရှေးခယျြမှု မမှနျကနျခွငျး
B-လူမှနျမြား မရှေးမိသညျ့အတှကျ နရောမြားစှာ တှငျ စိတျခထြား၍ မရတော့ဘဲ ဝငျပါလာရခွငျး၊ သို့အတှကျ central executive functions မြားအတှကျ အခြိနျလြော့နညျးခွငျး
C- နရောမြားစှာတှငျ လူကွီးမြားပါရသညျ့အတှကျ လကျအောကျမြား အလိုလို ဘောငျကဉျြးသှားခွငျး
-သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ သမ်မတရာထူးရယူပွီး နောကျ activities မြား
-ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၏ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ပွညျတှငျး ခရီးစဉျမြားနှငျ့တှဆေုံ့မှုမြား
-၂၀၁၉ ရနျကုနျစညျပငျရှေးကောကျပှဲနှငျ့ လူငယျတဈဦးအား ထုတျပယျခွငျး ဖွဈစဉျ
Previous ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဦးနှောကျ နဲ့ နှလုံးသား
Next ရဲတပျရငျးနားက အမွောကျသံ